MUUQAAL: Farmaajo oo Muqdisho ka bilaabay Tallaabo aysan hore u qaadin Musharixiinta kale ? - Hablaha Media Network
MUUQAAL: Farmaajo oo Muqdisho ka bilaabay Tallaabo aysan hore u qaadin Musharixiinta kale ?
HMN:- Maxamed C.laahi Farmaajo oo ah Musharax u taagan Xilka Madaxwaynaha Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka sameeyay Talaabo aysan horey u qaadin Musharixiinta kale ee u taagan Xilka Madaxwaynaha.
Farmaajo, oo ka jawaabaya codsi kaga yimid dhalinyarada is xilqaatay ee UBAXA CAASIMADA, ayaa wuxuu kaalmo maaliyadeed oo mug leh-na ka geystay sidii wadooyinka caasimada loogu heli lahaa calaamadaha muhiimka badbaadada nafta muwaadinka, dabadeedna loo dhireyn lahaa.
Inta badan Siyaasada Soomaaliya ayaa u muuqata in Bulshada laga Shaqaysto, Halkii loo shaqeyn lahaa waxaana dadku sugayaan Hogaanka Cusub ee Xildhibaanadu ay doortaan.